SOMALITALK - BANK
BANKIYADII QARANKA SOOMAALIDA
Dr. Abucar Said Abubaker
Dh. Yaaqaan, sarkaal B. Dhexe, B. Ganacsiga,
Iyo Shirkadda Shifco
Saxiixyadii Guddomiyaasha iyo Lacag hayaasha bangiga Soomaaliya iyo Lacagihii Soomaaliya
Sida la wada ogsoon yahay, waxaa dalka Soomaaliya ka jireyn ka hor intuusan dillaacin dagaalkii sokeeye oo lagu hoobtey sanadkii 1991dii, saddex bankiyo oo milkiyadooda uu iska lahaa Qaranka Somalida sida hay’adahii farabadnaa ayadoo dhamaan ay la wareegtey dawladda sanadkii 1970kii. Bankiyadaas magacyadood waxay kala ahaayeen: Bankiga Dhexe ee Somalia, Bankiga Ganacsiga Somaliyeed iyo Bankiga Horumarinta Somalida.
Bankiga Dhexe ee Somalia
Hawshii lagu aas aasay Bankiga Dhexe ee Somalia waxay bilaabatey xilli dalka Somalia (dhiniciisa koonfureed) uusan weli hantinin gobanimadiisa siyaasadeed ama uu ahaa oo keliya dhul (trusteeship territory) oo maamulkiisa uu u xilsaarnaa Talyaaniga. Magacii u horeeyey looga yeero bankiga wuxuu ahaa: “Circolazione Monetaria della Somalia”, hawsha uu dalka u qabanaayeyna, waagaa, waxay ahayd soo saarida lacagta ayadoo hawshaasu ay ka mid tahay hawlaha aasaasiga u ah banki dhexe kasta laguna aqoon -sado. Sanadkii 196okii magacaas waxaa loo beddeley “Banca Nazionale Somala” ama “Somali National Bank”kaddib markii dalku uu madaxbaanaaday ayna midoobeen goboladii koonfur( former Italian colony) iyo waqooyi(former British protectorate of Somaliland).
Taariikhdaas waxii ka dambeeyey ayaa si rasmi ah Bankiga Dhexe ee Somalia u bilaabay hawlahiisa kala duwanaa; hase ahaatee, ilaa dhammaadka sanadkii 1970kii bankiga wuxuu u shaqeynaayey sida bankiyada kale ee caadiga ah oo waxaa halkii uu ka waday macaamilkii uu la lahaa dadweynaha ayadoo laamo ay uga furnaa-yeen gobolada dalka oo dhan. Nassibdarrose, wadciga oo maarkaas uu waddanka ku suganaa iyo siyaasadda dawladda daraadood, waxyaabo badan oo uu bankiga rabay inuu sameeyo ma u suura galin inuu sameeyo, waxyaabo kalena uu sameeyey waxaa haboonayd inuusan sameynba ama uu u sameeyo si ka duwan. Hase ahaatee, qaldaad badan oo la galo ayadoo aqoon iyo khibrad midna loo lehayn hawsha la qabanaayo, badanaa waxaa laga kordhistaa waayo-arag markaas waxaa laga yaabaa in, ayagoo laga faa’idaysanayso waayo-aragaa, qaldaadkaas ayan mar labaad ayan dhicin ama kugu soo laaban. Haddaba, waxaa lagama maarmaan ah in halkan laga sheego qaldaadkaas ayadoo immikaan aan u diyaargaroweyn dib u dhiska dalka oo muddo 14 sano uu ahaa dawalad la’aan iyo sidii aan uga gudbi lehayn dib-u-dhaca.
Lacagtii Soomaalida ee 1962
Haddaba, haddii aan ka ammaan galo gef, ayaa waxaan dhihi karaa in Bankiga Dhexe ee Somalia, waagaa, uu haystey dhaqaalo lexaad leh oo leysku haleyn karey xag dheelitirka dhaqaalaha dalka iyo xag horumarinta dhaqan-dhaqaale ee ummadda somaliyeed intaba. Run ahaani, muddadii u dhaxeysay sanadihii 1960kii iyo 1970kii qiimaha shilling somali wuxuu ahaa mid sugan oo isbeddel lehayn ayadoo lacagta uu bankiga soo saaro ay ku dheelitirneyd badeecada ay taalo suuqa, iyo iyadoo lacagaha qalaad oo bankiga ay ugu jirtey xisaabaatka dibedda ay ahayd mid aad iyo aad ay u fiicnayd . Sidaa daraadeed, waxaan dhihi karaa in waagaa dhaqaalaha waddanka uu ahaa mid iska hormarsan oo mashaakil qabin.
Nasiibdarro, dhaqaalahaas wuxuu noqday, kolkii dambe, mid maalinba maalinta ay ka dambeysa uu sii xumaanayey ayadoo ugu wacnay dawladda oo faraha la gashey arrimaha bankiga, dabadeedna ay bilaabatey in si xad dhaaf ah loo gurto keydka bankiga ( shilling somali iyo lacagaha qalaad) laguna kharajgareeyo mahrajaan oo sanadka kastaba dalka gudihiisa lagu qaban jirey, iyo safaro isdabajoog ah oo wufuud ka socota dawladda ay u kacaayeen dibedda.
Muddo gaaban dhexdeeda horumariskii uu bankiga siinjirey dawladda (oo sanadkii 1970kii uu ahaa shilling somali 17 milyan oo keliya), wuxuu noqday kumanaan milyan shilling somali; taasina micnaheedu waxay ahayd in lacagtaas farabadan ay soo galeysey suuqa ayna sababtay in cirka ay ku shareeraan ascaarta badeecadaha iyo in uu hoos u dhoco qiimaha shilling somali ama ay yaraato wax goyntiisa (purchasing power). Natiijada waxay noqotey in aan fooda la soo galno qiime dhac “inflation” oo joogta ah, maxaa yeeley, waxaa yaraatey xitaa wax soo saarkii dhinaca beeraha iyo wershedaha ee dalka.
Duruuftaas dhaqaale waxay sii adkeeysay kolkii la bilaabay daabicid lacag dheeraad ah oo Bankiga Dhexe sidaa uu ku amraayey si loo daboolo baahida dawladda ayadoo lacagtaas lagu kharajgareynayey shaqo siinta ama meeleynta ardayda ay ka soo bixi jirtey dugsiyada sare iyo in lagu bixiyo biilsha caadiga ah ee dawladda sida mushaharada shaqaalaha. Runtii, sanad kasta dugsiyada sare waxay ka soo bixi jirtey kumanaan arday ka dib markii la fududeeyey imtixaanadii looga bixi jirey dugsiyadaas.
Midda kale, ayadoo duruuftaas adag ay ka jirtay dalka gudihiisa, ayaa haddana waddanku wuxuu fooda la galey dagaalkii 1977dii oo sababiyey in dadka ay ku adkaato nolosha, maxaa yeeley, khasaaradii dagaalka ka sokow, waxaa dalka ku soo kordhey mashaakil kale oo la xiriirtey qaxooti tiro badan oo ka yimid dalka Ethiopia dagaalka ka dib.
Bilowga sanadkii 1981dii, waxay dawladda Somalia oggolaatey in dib loo qiimeeyo shillinga so-mali oo markaas uu taagnaa 7.24 halkii dollar; ayadoo dawlada heshiis la gashey hay’ada IMF-ta si bal looga gudbo marxaladda adag ee uu waddanka maraayey. Taarikh- daas waxii ka dambeeyey qiimo dhaca xoog leh ayaa ku yimid shilling somali ; kaasoo uu socday ilaa dhamaadka sanadkii 1990kii isagoo qiimo dhacaas uu wehliyo maamul xumo oo, guud ahaan, uu saameeyey dhamaan xafiisada dawladda, bankiyada iyo hay’adaha kale. Sanadkii 1988dii madaxda Bankiga Dhexe iyo madaxda Wasaaradda Maaliyadda wax talo ah fara kuma ay hayn. Run ahaan, madaxdaas ma ahayn kuwo lahaa aqoon duruqsan xagga dhaqaalaha; sidaa daraadeed, awoodna uma lehaynay in ay adeegsa- daan siyaasada bankiga oo afka qalaad loogu yaqaano “monetary policy” iyo tan wasaaradda oo iyadana loo yaqaano “fiscal policy” si bal ay u suurtowi lehayd waxkaqabashada dhibaatada dalka ka haystey dhinaca dhaqaalaha. Waddama dhaqaalahooda aad u hormarey waxaa aad ay u daneeyaan doorka bankiga dhexe iyo wasaaradda maaliyada ay ka ciyaaraan dhinaca dheelitirka dhaqaalaha iyagoo adeegsanayaan labadaas xeer ee aan soo sheegay. Tusaale, korsaarka (interest rate) oo qayb ka ah awooda bankiga dhexe, waxaa wadamadaas loo adeegsadaa xagga kordhinta iyo dhimiska lacagta soo gasho suuqa ayadoo ujeeddada laga leeyahay fulinta hawshaasu ay tahay in la kobciyo ayadoo isla markaa leyska ilaalinaayo qiimo bararka .
Haddaba, waddamada aan soo sheegay guusha madaxtimada badanaa waxaa nasiib u yeesha siyaasigii ku guuleysto inuu hoos u dhigga heerka korsaarka (si dadka ku hawlan waxsoosaarka ay u helaan amaah qiimo jaban) iyo inuu xaqiijiyo dheelitirka dhaqaalaha dalka. Nasiibdarro, waddankeenna waa lagu guuleysan kari waayey meel marinta arrimaha oo kale ama xilweyn leys kama saarin xalintooda, maxaa yeeley, ma nihin dad dadaal badani ama ay ku jirto wadanimo. Laga yaabo in dhaqaalaha dalkeenna uu ka sii daro markii aanu eegno dhinaca tirada xildhibaanada barlamaanka iyo tirada wasiiradda dawladda; taasoo aad moodo in ay ku bixi doonto kharajyada aan awood u yeelan doonin . Hubaal, in aan laga faa’idaysan waayo-aragii laga dhaxley qaladaadkii horey u dhecay.
Bankiga Ganacsiga Somaliyeed
Bankiga Ganacsiga Somaliyeed waxa uu ka mid ahaa bankiyada ay lehayd dawladda, waxaana laga soo aas aasay isugeyn laysugu geeyey bankiyadii ka jireyn dalka oo milkiyadooda ay iska lahaayeen dad shisheeye ahaa (markii lala wareegay ka dib) sida “Banco di Napoli”, “Banco di Roma”, “Bank of Port Said” iyo kuwo kale oo isla dawladda ay iska lehayd sida “Banco Credito”. Waxaa kaloo bankiga isaga ah la dhaxalaysiiyey dhammaan laamahii Bankiga Dhexe; kuwaasoo oo ku baahsanayeen gobolada dalka oo dhan, maadaama waxii ka dambeeyey sanadkii 1971dii macaamishsa Bankiga Dhexe ay ka koobnaayeen wasaaradaha iyo hay’adaha oo keliya . Sidaa daraadeed, Bankiga Ganacsiga wuxuu ahaa bankiga ugu weyn uguna dhaqdhaqaaq badanaa dalka gudihiisa ayadoo ay badnaayeen dadka ay la macaamili jireen. Hawlaha farabadan uu bankiga ganacsiga u qaban jirey dadweynaha waxay kala ahaayeen: furid xisaabaha keydka( saving accounts), xisaabaha socda(c/c accounts), furid buugag keydka, furid L/Cyaa, xawilaad lacageed, iyo amaah siin. Hase ahatee, hawlahaas si la rabay oo maslaxadda bankiga iyo tan dalka ay ku jirto uma fuli jirin.
Haddaba, waxay caado ahayd in saraakiisha Bankiga Dhexe ay cabasho ka muujiyaan sida ay wax u maamuli jireyn saraakiisha Bankiga Ganacsiga, gaar ahaan, madaxda laamaha bankiga siibo hawlaha ku saabnaayeen bixinta amaahda , xoolo dhoofinta, iyo xawilaada. Madaxdaas waxay mas' uul ka noqdeen bixin amaah oo kor ay u dhaafeen malaayiin shilling somali ; taasoo ka soo horjeeday xeerka u degsanaa bixinta amaahda.
Sidoo kale, waxaa iyadana laga caban jirey dhoofinta xoolaha nool iyo u xawilaada; hawlahaasoo dhan waxay ahaayeen kuwo la dhaliiley oo aan waafaqsanaan jirin xeerka u degsanaa. Mathalan, waxaa dhici jirtey in xoolo badan la dhoofiyey haddana aan la arki jirin wax lacag ah oo ka soo noqoto xoolahaas la dhoofiyey iyo lacagyo badan oo laxawili jirey iyadoo loo haysan wax ruqsad ah.
Haddaba xaaladdaas bay ahayd tan uu ku sugnaa Bankiga Ganacsiga ilaa dhammaadka sanadkii 1981dii; iyadoo madaxda Bankiga Dhexe dhawr goor ay isku dayeen inay wax ka beddelaan siyaasada amaahda haddana gefafka ay gali jireyn madaxda Bankiga Ganacsiga halkii bay ka socon jireen; taasoo ay ugu wacnayd nidaam darri iyo maamul xumo ka jireyn dalka gudihiisa. Midda kale, amaahda ay bixin jireen madax-daas ma ahayn mid loogu daneyn jirey danyerta!
Midda kale, tobankii sano u dambeeyey ka hor inta uusan dhicin dagaalkii sokeeye, xaaladda Bankiga Ganacsiga way ka sii dareysay ayadoo asbaabaha taa ay ugu wacaneyd ay ka mid ahayd kordhinta shaqaalaha bankiga; Runtii, shaqaale farabadan ayaa lagu soo wareejiyey bankiga; kuwaasoo ka kala yimid wasaaradaha iyo wakaaladaha dawladda iyagoo wax aqoon ah ay u lahaayeen shaqada bankiga aysan jirin; hase ahaatee, wareejintooda waxay iska ahayd arrin ay u horseedeen raggii markaas haayey talada dalka , ujeeddada laga lahaana ay ahayd raalli galinta taageerayaasha dawladda. Shaqalahaas ka sokow, waxaa bankiga lagu meeleyn jirey sida bankiyada oo kale, ardayda kaddib markii ay dhamaysataan shaqada qaranka. Runtii, tirada shaqaalaha bankiga aad bay u badnayd; tusaale ahaan, qayb kasta oo fulinta hawsheeda ay ku filnaayeen jirtey tiro yar oo shaqaale ah ayaa waxaa ka shaqeyn jirtey soddon shaqaale ama ka badan. Intaas waxa dheer in ay dhici jirtey in hawlaha qaybta sida la rabay aanay u socon jirin. Kartidii iyo hufnaatii lagu yaqiini shaqaalihi bankiga ee waagii hore oo shaqada bankiga lagu gali jirey imtixaano waa la waayey.
Nasiibdarro, sanadihii dambe, Bankiga Ganacsiga madaxdiisa waxay ahaayeen rag karti iyo khibrad shaqo midna aan lagu arkin; run ahaan, mana ahayn madax awoodi karta in horey u arkaan caaqiba xumada ka imaan kartey go’aanadii ay qaadan jireyn xagga bixinta amaahda xad dhaafka ah iyagoo isku haleyn jirey taageerada ay ka haysteen dawladda;amaahdaas sida aan horey u sheegay, ma ahayn kuwo waafaqansan xeerka u degsanaa bixintooda oo ay ilaalin jirtey madaxda Bankiga Dhexe. Haddaba, waxaa dhici jirtey in lacag amaah ah loo oggolaado qof oo wax damaanad ah uusan heli karin oo damaanad uu ka dhigto guri uu ka gatey lacagtii amaah ahaan loo siiyey. Fowdadaas waxaa aad uga faa’idaysteen kooxo dhalinyaro ahayd oo magacaabidooda aan laga taxadirin; kuwaasoo, run ahaan, waxa ay mas’uul ka noqdeen fashilka ku dhacay bankiga kadib markii dhalinyaradaa si sharci darro ah ay ku bixiyeen amaah xitaa lacagtii keyd ahaan loo keensadey bankiga.
Sharcidarradaas waxaa ka mid ahaa in malaayiin shilling somali ah loo bixin jirey amaah ahaan ayadoo macaamiisha loo caseyn jirey xisaabaha socoda (c/c account) ee ay ku lahaayeen bankiga; taasoo micnaheedu ahayd in macaamiishaas la siin jirey horumaris oo danahooda ay ku fushaan ayadoo wax korsaar ah lagu xisaabinayn. Waagaasna heerka korsaarka uu Bankiga Dhexe u xadiday si uu u xakameeyo amaahda wuxuu maraayey 22% ; shaki la’aan in habka xisaab caseynta uu ahaa mid ay ka faa’idaystaan madaxda bankiga iyo macaamishooda ayadoo la caadeystey in la maalgaliyo L/Cyo (oo qiimahooda aad u badanaa) xag keenid badeeco iyo xag dhoofin xoolo nool intaba. Amaahda kale oo caadiga ahayd, qofkii loo oggolaan jirey boqolkii shilling oo amaah ah wuxuu ka nasiibsan jirey 68 , maxaa yeeley, bixinta korsaarka bankiga oo sida aan kor ku soo sheegay uu ahaa 22%, waxaa u dheeraa bixin hawl fududeen ay iska lahaayeen madaxdii u dabirtey amaahda. Runtii, waxaa Bankiga Ganacsiga ku batey deymo badan oo laga quustey(bad debts), maxaa yeeley, dad badan, gaar ahaan, kuwo ku xirnaa madaxda sare ee talada dalka haayeen, xilweyn iskama ay saari jirin dib u celinta deymanka lagu lahaa. Dhinaca kale, danyartii ka tirsanayd macaamishii Bankiga Ganacsiga waxay u suura gali weyday in lacagtii u tiiley bankiga dib uga soo ceshtaan ayadoo taasi ugu wacnayd “bankruptcy”; ku dhacay isla bankiga; kaasoo uu saameeyey xitaa Bankiga Dhexe. Inkastoo akhbaarta “bankruptcy”ga si rasmi ah aan loogu dhawaaqin haddana wuxu ahaa mid aan marna la qarin Karin. Intaa waxaa dheer in rabshadahii ka dambeeyeen dagaalkii sokeeye waxay fursad u siiyeen dad badan in ay boobaan hantida bakiyada intii ka hartey. Midda kale, ilaa waqti dhow shakhsiyaad ayaa fursad u helay in ay lacag kala baxaan xisaabaadka dibedda ee labada banki!!. Taasina waxay marqaati-kac u tahay maamul xumo iyo dagaal waxay wadankeenna u sababeen oo ah dib u dhac hal qarni ah.
Bankiga Horumarinta Somalida
Muddadii u dhexeeysay sanadihii 1950kii iyo 1960kii waxaa dalka Somalia(dhinaca koonfur) ku badnaa warshado yar-yar oo ay sameeysteen talyaanigii badnaa ee joogey dalka gudihiisa, gaar ahaan, magaalooyinka sida Laas Qorey, Jowhar, Balcad, Muqdisho, Marka, Baraawe, iyo Kismayo ayadoo waxsoo-saarka warshadhaas uu ka koobnaa cabitaan kala duwan, hilib iyo kalluun qasa- ceysan, saliida wax lagu karsado(sisinta iyo looska), saliida madaxa la marsado ee qumbaha, saabuunta iwm. Nasiibdarro, warshadahaas oo ay qayb ka ahaayeen tilaabo horumar ah oo markii dalka uu amba qaaday kaddib markii sanooyin badan uu ku jirey gumeysi, haddana ma ay noqon kuwo sii jira sababtoo ahayd in faraha laga qaaday kolkii raggii talyaaniga dalka ay ka dhoofeen gobanimad ka dib.
Haddaba, ujeeddada laga lahaa aasaa-sida Bankiga Horumarinta Somalida toddobaatankii iyo waxii ka dambeeyay waxay ahayd in dib loo abuuro warshadahaas iyo in la sameeyo kuwo kale si loo hormariyo dhaqaalaha dalka. Sidaa daraadeed, tilaabadii ugu horeeysay uu bankiga qaado xagga xaqiijinta hilimadaas waxay ahayd, iyagoo uu kaashanaayo Bankiga Dhexe ee Somalia iyo Bankiga Horumarinta ee Africa, sameynta warshada baastada, tan cambaha iyo yaanyada iyo kuwa kale. Hase ahaatee, dhammaan warshadahaas yar-yar waxay ahaayeen kuwo milkiyadooda ay iska leedahayd dawlada. Run ahaan, waxay wanaagsanaan lehayd in milkiyadoodi loo daayo shacbiga, maxaa yeeley, sida badanaa ka dhici jirtey dalkeenna(waagaa) waxii dawladda ay lehayd waxaa loogu daneyn jirey dad gaar ah oo keliya.
Hase ahaatee, waxii ka dambeeyey sanadkii 1985tii Bankiga Horumarinta Somalida waxaa amaah uu ku bixiyey dhowr makiinooyin oo ah kuwo saliida, matoorooyin oo loo deegsado xagga waraabinta beeraha iyo qalabyo kale. Nasiibdarrose, alaabtaasoo oo dhan waxaa loo gacan galiyey shakhsiyaad oo sida la rabay aan uga faa’idaysan. Qarkooda way iska iibiyeen alaabtii amaah lagu soo siiyey , lacagtii ka soo gasheyna waxay ku isticmaaleen arrimo kale ayadoo lacagta lagu soo gadey alaabtaas ay ahayd amaah uu bixiyey Bankiga Horumarinta ee Africa si loogu gargaaro dalka Somalia xagga abuurida warshado yar-yar.
Qormada Hore... maraakibtii Soomaaliya...
SUNTA KU DUUGAN SOOMAALIYA::: Hordhac | 1aad | 2aad | 3aad | 4aad | 5aad | 6aad | 7aad | 8aad |